Disney + waa lacag la'aan xilligan, laakiin hal waddan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Disney + waa bilaash hada, laakiin hal wadan - BGR
Diiwaangelinta qulqulka Disney waxaa kaliya oo la heli karaa laba bilood gudahood, iyadoo bisha November ee 12 ay calaamadineyso bilawga rasmiga ah ee nidaamka 'Disney +. Si kastaba ha noqotee, haddii aad hadda ku sugan tahay Nederland, waad ku tijaabin kartaa si bilaash ah ilaa laga bilaabayo, maxaa yeelay Disney waxay bilawday baaritaan toos ah adeegga.
xiriirka de The Verge et Droid-Life Xaqiiji in adeeggu mar horeba laga heli jiray waddanka, kaasoo ku dhaca mid ka mid suuqyada furitaanka 'Disney +'.
Source Image: Droid-Life
Waxaad adeegga ku isticmaali kartaa aagag badan oo Nederland ah, oo ay ku jiraan iPhone, Android iyo Web. Koontada ayaa taageerta ilaa iyo 7 tibaaxood, mid in kabadan wixii la filaayey, waxayna heli kartaa heerka Caruurta si ay u tirakooto waxa ku jira. qarka u saaran waxay maamuli karaan shan durdur oo isku mar ah, oo ay ku jiraan labo biraawsar, wax walbana si hagaagsan ayay u socdaan. Koonto kastaa waxay taageertaa afar durdur oo isku mar ah oo tayada fiidiyaha illaa 4 K.
Waxyaabaha ku saabsan tayada fiidiyowga, bandhigyada qaarkood ayaa laga heli karaa 4K Ultra HD iyo HDR waxaadna ka heli kartaa qeybta heeganka leh. Si kastaba ha noqotee, ma raadin kartid waxyaabaha ku jira 4K sida ay hadda tahay.
Source source: Droid-Life
Sida aad u maleynaysid, maktabaddu xoogaa way xadidan tahay sababta oo ah waa tijaabo iyo inta kale oo dhan. Bandhigii asalka ahaa ee Disney + muuqaal ahaan kama muuqan doono, laakiin waxyaabo badan ayaa ka kooban Marvel iyo Star Wars si loo tijaabiyo. Qeyb Qiimeed iyo Fairytale ayaa sidoo kale la heli karaa waxaana ku jiri doona dhamaan filimada Disney Princess.
Adeegyada AirPlay iyo Chromecast horeyba waa loogu dhex daray adeegga wayna shaqeeyaan, sidoo kale muujinta soo degsashada ee dib u soo celinta qadka. Disney + ayaa soo xusuusan doonta horumarkaaga isla markaana ka saari doonta dib-u-fiirin fiidiyowga meeshii aad joojisay daawashada, laakiin muuqaalku kama shaqeynayo nooca biraawsarka ee barnaamijka.
Guud ahaan, waaya-aragnimadu waxay u muuqataa inaysan lahayn cayayaan-la'aan isla markaana aan cilad lahayn, laakiin waxaan tixgelinaynaa tijaabo xaddidan halkan. Waxaan rajeyneynaa in tayada adeegga aan la saameyn doonin markii dad badan oo macaamiisha ah ay yimaadaan November. Ma jirto sabab ay uga walwalaan arrintan xilligan. Warbixinnada usbuucyadii hore ayaa daaha ka qaaday in Disney ay ka shaqeyneyso inay Disney + ka jawaabto baahida aadka u weyn oo ay siiso waayo-aragnimo qulqul aad u wanaagsan bilowga.
Isha Sawirka: Disney
loo qeybin karo